စျေးပေါသော Anodized အလူမီနီယမ်အလွိုင်းစက်အစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Ouzhan
Anodized aluminium alloy သည်ထုတ်ကုန်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ယူနီဖောင်းနှင့်သိပ်သည်းသောအောက်ဆိုဒ်အလွှာကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ((Al2O3, 6H2O ဘုံအမည်သံမဏိကျောက်စိမ်း) ။ ဤရုပ်ရှင်သည်အထူးထုတ်ကုန်များဖြစ်ပါကထုတ်ကုန်၏မျက်နှာပြင်မာကျောမှုကို (200-300HV) ရောက်ရှိနိုင်သည်။ hardodod လုပ်နိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်၏မျက်နှာပြင်မာကျောမှုသည် 400-1200HV သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် hard anodizing သည်ရေနံဆလင်ဒါ, transmissions နှင့်အခြားသူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမျက်နှာပြင်ကုသမှုဖြစ်သည်။
6063 လူမီနီယံအလွိုင်း anodized CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများ
ထို့အပြင်ဤထုတ်ကုန်သည်အလွန်ကောင်းသောခံနိုင်ရည်ရှိပြီးလေကြောင်းနှင့်အာကာသဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များအတွက်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ anodic oxidation နှင့် hard anodic oxidation အကြားခြားနားချက် - anodic oxidation ကိုအရောင်ခြယ်နိုင်ပြီးအလှဆင်ခြင်းသည် anodic oxidation ထက်များစွာကောင်းပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးနေရာများ - Anodic oxidation သည်အလွန်တင်းကြပ်သောပစ္စည်းများလိုအပ်ပြီး၊ ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးသောအလှဆင်မှုများရှိသည်။ အများအားဖြင့်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများသည်စသည်တို့ကို 6061, 6063, 7075, 2024, စသည်တို့ဖြစ်သည်။ 2024. သည်ပစ္စည်းတွင် Cu ၏ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများကြောင့်အတော်လေးယုတ်ညံ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၇၀၅၇ အောက်ဆိုဒ်အညစ်အကြေးသည်အဝါရောင်ရှိပြီး ၆၀၆၁၊ ၆၀၆၃ သည်အညိုရောင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သာမန် anodized 6061, 6063, 7075 သည်ကွာခြားမှုသိပ်မရှိလှသော်လည်း ၂၀၂၄ တွင်ရွှေအစက်အပြောက်များကျရောက်လေ့ရှိသည်။
A. အစက်အပြောက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပေါ်လာပါသည်။ ထိုသို့သောပုံမှန်မဟုတ်သောမျိုးကိုယေဘုယျအားဖြင့်သတ္တုညံ့ဖျင်းခြင်း၊ ကုသမှုနည်းလမ်းသည်ကုသမှုကိုပြန်လည်အပူပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းပြောင်းပါ။
ခ) သက်တံအရောင်များသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်။ ဤပုံမှန်မဟုတ်သောမျိုးသည် anode operation error ကြောင့်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ဆွဲထားသောအခါချွတ်ယွင်းသွားပြီးထုတ်ကုန်၏စီးကူးနိမ့်ကျမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဖြေရှင်းချက်၊ စွမ်းအင်ဖြုတ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည် anodize လုပ်ခြင်း။
C. မျက်နှာပြင်နင်းနယ်လျက်ရှိသည်နှင့်အလေးအနက်ထားခြစ်နေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပုံမှန်မဟုတ်သောမျိုးကိုယေဘုယျအားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (သို့) အပြောင်းအလဲလုပ်စဉ်အတွင်းသတိမရှိသောလည်ပတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း၊ ကုသမှုနည်းလမ်းသည်လျှပ်စစ်၊ သုတ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်အားဖြည့်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ဆေးဆိုးနေစဉ်အတွင်းမျက်နှာပေါ်၌အဖြူရောင်အစက်များပေါ်လာသည်။ ၎င်းပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်စဉ်ကို anode လည်ပတ်စဉ်အတွင်းရေတွင်ရေသို့မဟုတ်အခြားအညစ်အကြေးများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။
၁။ ရုပ်ရှင်အထူ 5-25um, 200HV ထက်ပိုသည်။ တံဆိပ်ခတ်စမ်းသပ်မှု၏အရောင်ပြောင်းလဲမှုနှုန်းသည် ၅% အောက်သာရှိသည်။
၂။ ဆားမှုန်ရေမွှားစမ်းသပ်မှုသည် ၃၆ နာရီကျော်လွန်ခဲ့ပြီး ၉ အထက်ရှိ CNS စံနှုန်းသို့ရောက်နိုင်သည်။
၃။ အသွင်အပြင်ကိုကြိတ်ခြင်း၊ ခြစ်ခြင်း၊ အရောင်တိမ်ခြင်းမပြုရ။ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းသုံးထားသောအစိတ်အပိုင်းများ၏မျက်နှာပြင်သည်ဆွဲကြိုး၊ အဝါရောင်စသည်ဖြင့်မလိုလားအပ်သောဖြစ်ရပ်များမဖြစ်သင့်။
မှတ်ချက် - A380၊ A365, A382 စသည့်သွန်းလောင်းသောလူမီနီယံအပိုပစ္စည်းများကို anodized လုပ်၍ မရပါ။
ပစ္စည်း လူမီနီယမ်အလွိုင်း 6061, 6063, 7075, 2024
ရှေ့သို့ လူမီနီယမ်အလွိုင်း radiator extruded အစိတ်အပိုင်းများ
နောက်တစ်ခု: အနက်ရောင် anodized 6061-T6 လူမီနီယံအလွိုင်း CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများ